सुनिलमार्ग स्तरोन्नतिको काम शुरु
रोल्पा । रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका र सदरमुकाम लिबाङ जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सुनिलमार्ग स्तरोन्नति गर्ने काम शुरू भएको छ । आगामी वर्ष कालोपत्र गर्ने तयारी गरिएको सडकमा यस वर्ष सडक चौंडा गर्ने काम भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको रू. ५० लाख र प्रदेश सरकारको रू. ५० लाख गरी कुल रू. १ करोड लागतमा सुनिलमार्ग स्तरोन्नति गर्ने काम शुरू भएको हो । सुनिलमार्ग अन्तर्गत यस वर्ष सुनिलस्मृति गाउँपालिका तर्फको जम्मा १४ किलोमिटरमा सडक चौंडा गर्ने काम भइरहेको छ । आगामी वर्ष यो सडकलाई कालोपत्र गर्ने तयारी भइरहेको सुनिलस्मृति गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष अर्जुन सुवेदीले बताए ।
‘सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको धेरै भूभाग जोड्ने भएकाले हामीले यो सडकलाई प्राथमिकता दिएका हौं’, सुवेदीले भने, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि यो सडक कालोपत्र गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र सुनिल पार्क–गजुलकोट दरबार हुँदै जलजला मार्गमा जोडिने भएकाले यो सडकलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएका हुन् । सुनिलमार्गलाई जिल्लाको सदरमुकाम लिबाङ र दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र सुलिचौर बजारलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडकका रूपमा पनि विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।